राजधानीका सडकः जलमग्न कि ढलमग्न ? (फोटो र भिडियोसहित) - Naya Patrika
सन्तोष भट्टराई, काठमाडौं/नयाँ पत्रिका | असार २५, २०७४
काठमाडौं, देशको राजधानी । यहाँ कहिल्यै पाइला नटेकेकालाई यहाँ के–के न होला जस्तो लाग्न सक्छ । देशका अन्य सहरभन्दा भौतिक पूर्वाधारले समृद्ध, व्यवस्थित बसोबासको केन्द्र तथा सफा र स्वच्छ होला भन्ने कल्पना तिनको मनमा बसेको हुन सक्छ । तर, जब काठमाडौंमा पाइला टेकिन्छ, ती कोरा कल्पनामा सीमित भइदिन्छन् ।
राजधानीमै घरजम गरेका वा काम विशेषले आउने गरेका नेपाली मात्र होइन, नेपालको सुन्दरताको बयान सुनेर रसस्वादन गर्न आउने विदेशी पर्यटक पनि ढलमाण्डुबाट आजित भइरहेका छन् ।
एकीकृत विकासको अभावमा विभिन्न मन्त्रालयले मनोमानी रूपमा बाटो भत्काउने कार्य गर्दा हिउँदको समयमा धुलाम्ये र वर्षायाममा हिलाम्ये हुने गरेका सडकको संख्या गनेर साध्य छैन । मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा आकाशे पानीको भर गर्ने लाखौँ किसानलाई वर्षाले राहत दिने गरेको छ । तर, राजधानीका सडकमा यात्रा गर्नेहरूका लागि त्यही वर्षा आहत बनेर आउँछ ।
आइतबार साँझ त्यस्तै भयो । करिब १५ मिनेटजति परेको दर्कन पानीले पुतलीसडक क्षेत्र जलमग्न बन्यो । सडकमा पानी मात्र बगेन, ढल फुटेपछि सडक ढलमग्न बन्यो । ढल मिसिएको पानीमा हेलिँदै सवारी साधन हुइकिँदा त्यसको मारमा पेटीबाट यात्रा गरिरहेका यात्रुसमेत परे । हुइँकिएका सवारी साधनले छ्यापेको फोहोर पानी शरीरभरी परेपछि धेरै पैदलयात्रुको आक्रोशको पारो चढेको देखिन्थो । ढलमग्न सडकमा यात्रा गर्न मोटरसाइकल, स्कुटर र ट्याक्सी जस्ता साना सवारी साधनलाई पनि निकै सास्ती देखिन्थ्यो ।
त्यति नै वेला साइरन बजाउँदै एकजना भिभिआइपीको सवारी चल्यो । बेगसँग हुइँकिएको सवारीले थुप्रै सर्वसाधारणलाई भिज्न बाध्य पार्याे । प्रतिक्रियामा सर्वसाधारण सवारीतिर धारे हात लगाउँदै गरेका देखिए । तर, तिनको पीडा कसले सुन्थ्यो र ? सवारी एकैछिनमा बिलिन भयो, ढलमग्न सडकमा छिटाहान्न फेरि अर्को गाडी आइपुग्यो ।